SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
NGATIMBOTII une shamwari yaunoyemura chaizvo, asi shamwari yako iyi inoita chimwe chinhu chausinganzwisisi. Vamwe vanobva vatsoropodza shamwari yako vachiti ine utsinye. Ungabva wakurumidza kufunga saizvozvowo here, kana kuti unomirira kuti shamwari yako itaure zvakaitika? Kana kuri kuti shamwari yako haipo, waizoimirira here asi uchivimba nayo kuti haina utsinye?
Usati wapindura, pane zvakawanda zvaungada kuziva. Ungazvibvunza kuti, ‘Shamwari yangu iyi ndinonyatsoiziva zvakadini uye nei ndichiiyemura?’ Izvozvo zvine musoro. Asi chimbofunga izvi: Hatifaniri kuitawo saizvozvo here tisati tataura kuti Mwari ane utsinye?
Ungaomerwa nokunzwisisa zvimwe zvakaitwa naMwari kana kuti ungashamiswa nezvimwe zvinhu zvaakarega zvichiitika. Vakawanda vachakuudza kuti Mwari ane utsinye uye vachakukurudzira kuti uonewo Mwari saizvozvo. Uchambomira kumupa mhosva here kusvikira wava kuziva zvakawanda nezvake? Mhinduro yako ingabva pakuti unoziva Mwari zvakadini. Zvibvunze kuti, ‘Mwari ishamwari yakaita sei kwandiri?’
Kana wange uchisangana nematambudziko muupenyu hwako, unganzwa uchida kutaura kuti Mwari haasi shamwari yako. Asi chimbofunga izvi. Mwari ndiye anga achikonzera matambudziko muupenyu hwako here kana kuti ange achikuitira zvakanaka chete? Sezvataona, “mutongi wenyika ino” ndiSatani, kwete Jehovha. (Johani 12:31) Saka Satani ndiye anokonzera nhamo dzakawanda uye kutambura zviri munyika ino. Uye haubvumi here kuti matambudziko edu akawanda anokonzerwawo nokuti tine chivi uye nezvimwewo zvingatiwira tisingafungiri?
Mwari ndiye anga achikonzera matambudziko muupenyu hwako here kana kuti ange achikuitira zvakanaka chete?
Asi ndezvipi zvakaitwa naMwari? Bhaibheri rinoti Mwari ndiye “Muiti wedenga nenyika.” (Pisarema 124:8) Rinotiwo basa rake rinosanganisira miviri yedu iyo yakasikwa “nenzira inoshamisa.” (Pisarema 139:14) Uye rinototaura nezvaJehovha richiti ‘ndiMwari ane mhepo yedu yokufema muruoko rwake.’ (Dhanieri 5:23) Zvose izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti takasikwa naMwari uye ndiye anotiraramisa. (Mabasa 17:28) Zvinorevawo kuti chipo choupenyu, kunaka kwezvinhu zvakatipoteredza, kunakidzwa noushamwari uye rudo, kuravidza kwatinoita, kubata, kunzwa uye kunhuhwidza—zvose zvipo zvinobva kuna Mwari. (Jakobho 1:17) Haubvumi here kuti makomborero ose iwayo anoita kuti Mwari ave shamwari yakakodzera kuremekedzwa uye kuvimbwa nayo?
Ichokwadi kuti ungaomerwa nokuvimba naMwari. Zvichida unoona sokuti hausati wava kunyatsomuziva zvokuti ungavimba naye. Izvozvo zvinonzwisisika. Munyaya dzino pfupi, hatingagoni kutaura zvinhu zvose zvinoita kuti vamwe vati Mwari ane utsinye. Asi haufungi here kuti kuziva Mwari zviri nani kushandira zviripo? * Tinovimba kuti pauchaita izvozvo, uchaziva chokwadi nezvaMwari. Mwari ane utsinye here? Kwete, “Mwari rudo.”—1 Johani 4:8.
^ ndima 8 Somuenzaniso, ona zvimwe zvikonzero zvinoita kuti Mwari arege uipi huripo muchitsauko 11 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Uchavimba naMwari Here?